Sonic lalao - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
Toa mbola manana ela ny hilalao lalao an-tserasera ao amin'ny Sonic. Io anthropomorphic sokina nampiantrano ho an'ny taranaka, ary mbola toy izany koa fanimbana, afa-po. Na izany aza, satria vao teraka dia nanana vitsy manova ny miseho, fa mba ihany no nahazo ny fiovan'ny - lasa ambony, niafina nify maranitra. Dia nandray anjara tamin'ny fifaninanana maro hetsika, lehibe milalao baolina kitra, fitraitraiky ary nihanika ambaratonga. Satria tsy azo ampitahaina amin'ny ady tsy misy olona, ​​rehefa voaomana sy ny malaza vava volamena. Ary ho refill, dia ilaina ny hanangona azy ireo amin'ny fotoana rehetra.
Hooray, isika indray afaka hilalao lalao maimaim-poana amin'ny aterineto Sonic X! Sokina amin'ny manga volo avy amin'ny gony no tsy handao ny lampihazo voninahitra nandresy. Izy fiadiana tena tamin'ny peratra volamena sy handringana ny fahavalony, sy nameno ny volamena tahirin, vonona ny mianika ny mideza rindrina, hitsambikina eo amin'ny sehatra, milentika ka hatrany ambany sy ny tany. Izy no matahotra na inona na inona ary lasa mariky ny herim-po. Ary ny tsy miezaka ny ho mahery fo, sy marina nefa mandany vola be. Ho azy, ity lalao ity - mba handresy ny manaraka fototr'izany, voasazy noho ny heloka sasany. Eny, ny heviny ny rariny eo Sonic mihoatra noho ny tenany.
Mahery & Ray amin'ny Sonic 2
mahery fo sonic
Sonic amin'ny Lalao Olaimpika Tokyo 2020
Ilay Runner mpanjakavavin'ny Snow
Boky fandokoana Sonic
Mihazakazaka baolina afo
Sonic 2 Maherifo
Hazakazaka Sonic Ladder Forces
Taranak'i Sonika 2
Fomba fampiasa amin'ny Fun Race 3D baldi
Lalao Sonic tamin'ny Category:
Farany Sonic lalao
Lalao Online Rehetra Sonic lalao
ny tantaran'ny malaza Sonic
New lalao video nivoaka isan'andro, tsy foana ny manolotra hevitra tsy manam-paharoa. Matetika izy ireo dia mifototra amin'ny zava-nitranga ny lohahevitra sy ny vokatra teo aloha, fanararaotana ny lazany mba hampiroboroboana ny vokatra ihany. Fantatra litera haingana kokoa hisarika ny sain'ny mpanjifa sy hiantohana ny fahombiazan'ny ny kilalao. Ny mpanoratra ny hevitra tany am-boalohany hoe izany fisandohana, fa maro no tsy miraharaha Gamers iza no ao ambadiky ny manaraka dikan-ny lalao. Izy ireo ihany no mikarakara ny fomba mampientam-po ny endriny vaovao.
Sonic lalao niseho tamin'ny 1991, ary natao ho an'ny hampionona Mega Drive sega. Ny anthropomorphic sokina manga lasa toerana tena amin'ny mpankafy sy ny platformer no tena mafy orina ao amin'ny tontolo virtoaly ny lalao, izay avy eo dia eo an-nomerika toerana ny solosaina manokana. Amin'izao fotoana izao, dia efa lasa ny tsy hita maso izay kofehy mampiray ny tombontsoan'ny ny mpampiasa ny taranaka fara mandimby.
Lahatra Sonic - ny hiady amin'ny fahavalon'ny izay mandrahona ny fisian'ny goodies am-pilaminana izay miaina ao amin'ny tontolo. Ny tena sy mivantana fitaovam-piadiana - bolamena, manome azy hery sy fahefana. Rehefa mifehy azy ireo nandritra ny lalao, nado hanara-maso tsy tapaka za ka tsy tapitra. Ny tahirin afaka feno ny fanao mandritra gameplay, manangona amin'ny ambaratonga isan-karazany. Raha lany, ny sokina ho amin'ny olana, sy ny fanoherany ny herin'ny ratsy dia ho resy.
Ny hanjo ny lalao Sonic amin'izao androntsika izao
ankehitriny, Sonic dia matetika hivahiny ao lalana sy ny foto-kevitra samy hafa ao amin'ny orinasa dia litera lalao hafa. No tsy dia malaza Mario matetika akaikin'ny Sonic sy niara-dia miady, samy amin'ny fotoany avy. Boky tantara an-tsary mahery fo, koa, dia tsy nisalasala ny ho amin'ny firaisan-kina miaraka amin'ny manga sokina, sy mandray anjara ho amin'ny fanafahana ny tsy manan-kery.
Play Lalao Sonic 2 ny mampihomehy, noho ny teti-dratsin'ny manolotra be dia be ny vaovao Adventures izay tokony hanampy sokina handresy ny zava-tsarotra. Mety ho nahita fomba avy amin'ny Misafotofoto, ny ady hanoherana ny zombies na ny fiarovana ny saham-avy amin'ny fanafihana ny manidina bloodsuckers - ny voalavo. Fanafihana ny milina ho tena fisedrana ny faharetana sy ny fahafahana Mandositra ny fahavalo fanafihana, ianao lavitra noho ny habeny sy ny fiadiana mafy. Tsy hitranga fotsiny amin'ny ady, fa ny fahavalo dia tsy manan-kery foana ny hevitra sy ny asany dia ny mahita azy.
ny Sonic lalao maimaim-poana amin'ny aterineto tolotra mba handray anjara amin'ny fanatanjahan-tena, izay mpilalao fototra dia manga sokina. Izy dia mihetsiketsika foana, ary raha lavo ny afaka ny ady iray minitra, faly ivelan'ny trano fitsaharana ho an'ny lalao, milalao ao amin'ny
tia manao ski ambony rano.
Ao amin'ny klioba Bowling mihitsy ny baolina ho any tsimatra mandondòna. Ny mafy tsilo miaro azy amin'ny ratra, ka manahy momba izany dia tsy ilaina.
Afaka milalao Sonic, mitondra môtô, dia ho vavolombelona raha ny mpiray tsikombakomba foolhardiness. Izy deftly kosa dia misarika an'ilay fiakarana, be tendrombohitra, tsy misy tsy mahay no mahatonga nivoaka avy aminy ary mampiseho ny fandrika ao amin'ny fiakarana, tsy manadino teny an-dalana mba hanangona ny fitaovam-piadiana - bolamena.
ny fanangonana ny zavatra nandritra ny fiaramanidina, Puzzles sy mamiratra mainty sy fotsy fandokoana, karohy fahasamihafana ka hiasa ny - izany rehetra izany Sonic lalao. Miaraka aminy sy ny namany, ianao handinika indray ny hevitra ny finamanana sy ny fiaraha fanampiana. Ity lesona ity dia ho sarobidy indrindra, miaraka amin'ny zava-misy fa afaka manao ny fihetsika haingana, mailo sy ny fahaizany mamikitra.
ny lalao malaza Sonic X
Ny lalao voalohany Sonic X natao ho an'ny Nampahery sega. Mihetsiketsika foana sokina amin'ny manga volo namely ny asa sy ny fisalasalana. Nitaky foana izy hetsika ary tokony hamela izany raikitra, dia tsy ela dia nanomboka stomp tongony, dia nitsambikina toy ny hoe any an-dafin'ny lalao, dia toy izany no mamela ny fiafarana. Passion ho famonjena ny izao tontolo izao ihany no ho antsika - ny mpilalao, dia toa ny fiantsoana sy ny tena tanjona eo amin'ny fiainana. Fa ny sokina tsy hahita zava-dehibe toy izany ny bitan'i. Ho azy dia lalao sy na inona na inona intsony. Ny hery no mitady ny lalan-kivoahana ka mahita toy izany ny endriky ny famonjena. Silasy no nanome vava volamena ka noho izany, raha azo atao, dia ilaina ny hameno ny boloky hazo, mandray na dia eny amin'ny lanitra.
Bika Aman 'endrika Sonic no niova be ny voalohany hatramin'ny endriky ny Monitors. Tamin'ny voalohany, fa ambany be, ary ny nifiny tahaka ny sabatra maranitra, dia foana eo imasony, ary nanana fomba fijery mahatahotra. Ary ny sokina naniry ka ny nify kely hita maso raha tsy rehefa manokatra ny vavany. Amin'ny lafiny hafa rehetra, dia mbola toy izany koa amim-pifaliana sokina.
Sonic danja mandrakariva
Sonic X mba hilalao amin'ny aterineto no tsy mankaleo. Nahazo tsikelikely izy lazany ary lasa mariky ny orinasa sega, raha vao hanala ny animation andian sy mamorona lalao ho an'ny mpampiasa solosaina. Mandritra izany fotoana kely hafahafa izany, miaraka amin'ny miandalana simulators, izay ny sary, gameplay sy mety ny mamorona ny tontolo virtoaly, Sonic X Games mbola eto amin'ny crest ny be mpitia. Tsy variana ny riaka nitondra zava-baovao ny teknolojia, fa ny mifanohitra amin'izany, Sonic mampivelatra sy mameno izao rehetra izao amin'ny endri-tsoratra vaovao. Ary matetika ny namany no hita ny Super Mario, supermen sy ny maro hafa avy amin'ny hafa sy ny tantara an-tsary lalao.
miaraka Sonic tsy maintsy rehetra ny fotoana any ho any mba handeha. Tadidinao ve fa sarotra ny hijanona amin'ny toerana iray nandritra ny fotoana ela, fa noho izy tsy miraharaha ny lalana haleha, fotsiny mba hanaovana asa. Nahita fa ny saham-boankazo nisy nanafika ny ramanavy, dia tsy misalasala nametraka hiasa mba hanadio azy amin'ny hanimba zavatra. Ary raha misy fahavalo maka hery, dia mila replenishment foana, izay mandray avy amin'ny peratra volamena. Ny fotoana hafa koa, dia tsy maintsy hiatrika ny vy milina. Io mpanohitra dia be mahery ary mampidi-doza kokoa noho ny totozy kely. Fa ny herim-po sy ny tapa-kevitra ny aquamarine sokina sy ny fitaovam-piadiana masina mba hanampy azy hiatrika ny olana rehetra. Tsy afaka milaza fa ny ady ho mora, fa tsy misy azo atao. Ny fanampiana dia tsy afaka handratra azy, fa noho ianao miara-mahafehy ny fahavalo tsy fotoana.
ny lalao manasongadina Sonic X
Sonic X Games, dia tsy ny fandravana sy ny ady. Raha ny marina milamina ny manodidina, dia afaka manao fanatanjahan-tena. Izany dia tsy leo Sonic kamo sy miaraka amin'izay koa, toby lehibe ho an'ny fiofanana amin'ny marksmanship, dexterity sy ny hafainganam-pandeha. Afaka Matetika hita ao amin'ny:
drano-tia manao ski ambony;
teo amin'ny sambo;
Nihazakazaka nanerana ny dity;
ho an'ny tsato-kazo vaulting.
Fa na izany aza dia tsy haharitra izy fahazarana sy miezaka ny manasarotra ny fiainanao. Fiara ny môtô, mazava ho azy, mahaliana, fa leo haingana. Fa raha handeha hisakafo any amin'ny fasika amoron-dranomasina, ary miezaka tsy tratra ao aminy - dia tena zavatra hafa. Ny fasika kokoa tahaka ny onjan-dranomasina mideza. Izy no nitaiza sy ankehitriny Sonic tsy tokony mitondra fiara fotsiny ny alalan 'izany, fa koa mba handresy ny tendrombohitra, nidina an hiantsoana an'ireo lavadavaka, hanangona tombontsoa ka nataony rehetra tao anatin'ny fotoana fohy. Fa raha zava-dehibe ny fampianarana, nandritra ny ady, dia ho mora kokoa. Raha mitovy hevitra, Tonga soa eto amin'ny ny Sonic X mba hilalao an-tserasera. Angamba, fandokoana, Puzzles ary mahita ny fahasamihafana mahaliana anao dia tena mpankafy be herim-po toy ny sokina.